ယူနီကုဒ်… ယူနီကုဒ်… | White Boy Learning Burmese
June 2, 2013 by Win Hein	6 Comments
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ မြန်မာလို မရေးတာကြာပြီမို့လို့ ဒီနေ့ပုစ်တ် တစ်ပုဒ်ကိုရေးထားမယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဘလောဂ်ပေါ်မှာမရေးပေမယ့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဗမာစာ၊ဗမာစကားတိုးတက်နေတယ်လို့ကတိထားပါတယ်ဗျာ့။ အခုတော့ တက္ကသိုလ်မှအနားယူနေမို့လို့ စပိန်လိုထက်နဲ့ ဂျာမန်လိုထက် ဗမာလိုပိုရေး ပြီး ပိုပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်ထင်တာက အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေလိုလည်းပြောသင့်ပါတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့် ဘွဲ့ရဖို့ ဘာသာစကားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ ;D။ ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနေ့ကျွန်တော် မြန်မာ ယူနီကုဒ် အကြောင်း ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဗျာ့။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ဒီ ပုစ်တ်မှာ ယူနီကုဒ်လိုရေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်သိတာက ကျွန်တော့်ပိရိတ်သတ်အများစုက ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုသုံးမို့လို့ ဘလောဂ်ပေါ်မှာ ဇော်ဂျီလိုပို့ထားပါမယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဘာဖြစ်လို ယူနီကုဒ်က ဇော်ဂျီနဲ့ Ayarထက်ပိုသုံးဖြစ်သင့်တယ်။
နံပါတ် ၁: ယူနီကုဒ်ရဲ့ အဆင့်အတန်းများ အမြဲတမ်းပြောင်းကြတယ်။
ခုနှစ်တိုင်း အင်တာနက်က ဆက်ပြောင်းပါတယ်။ ပြောင်းတော့ သဟဇာတဖြစ်ခြင်းရဖို့ updates နဲ့ upgrades ဖြစ်သင့်တယ်။ ယူနီကုဒ်အနေနဲ့လည်း ဘာသာစကားများစွာနဲ့သဟဇာတဖြစ်ခြင်းရှိအောင် updates နဲ့ upgradesလုပ်ရတယ်။ ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာ ယူနီကုဒ်ရဲ့ ပထမ အဆို (version)က “The Unicode Standard” (ယူနီကုဒ်အဆင့်အတန်း)လို့ခေါ်တယ်။ အခုတော့ အခေတ်အဆန်ဆုံးတဲ့အဆိုက ယူနီကုဒ် ၆.၂ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဆုံးမှာ ယူနီကုဒ်ရဲ့အဆင့်အတန်းမှာ အက္ခရာတွေ ၂၄ခုဘဲရှိတယ်။ အခုတော့ အက္ခရာတွေ ၁၀၀လောက်ရှိတယ်။ မြန်မာအက္ခရာအနေနဲ့ ၁၉၉၉ခုနှစ်မှာ ယူနီကုဒ် အဆို ၃.၀ ကို ဝင်လိုက်တယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာတော့ ယူနီကုဒ်အဆို ၅.၁တွင် မြန်မာအက္ခရာကိုပြောင်းနည်းနည်းပေးထားတယ်။ ဇော်ဂျီဖောင့်ကတော့ ယူနီကုဒ် ၅.၂ရဲ့ အဆင့်အတန်းတွေနဲ့မရှိမို့လို့ တခြားဖောင့်တွေကိုသုံးတာ (ဥပမာ ပိတောက်၊ မြန်မာ၃၊ စသည်ဖြင့်…) ဇော်ဂျီကိုသုံးထက်ပိုကောင်းတယ်။
နံပါတ် ၂: ယူနီကုဒ်လိုရေးတာပိုလွယ်တယ်လေ။
ဥပမာတစ်ပုဒ်ပေးမယ့်… ဇော်ဂျီလို့ “လို့” ရေးချင်တယ်ဆိုရင် V+K+D+Yတွေကိုနှိပ်တာကလိုအပ်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇော်ဂျီဖောင့်လို အောက်ကမြင် (့)မှာ နေရာသုံးရာရှိတယ် (h၊ Y၊ နဲ့ U)။ မြန်မာယူနီကုဒ်မှာတော့ နေရာတစ်ရာရှိတာဘဲ (h)။ နေ့ = aeh ကောင့်=aumifh
ပြီးတော့လည်း သိပ်မသုံးတဲ့အက္ခရာတွေလည်း နှိပ်တာ လွန်းလွယ်ပါတယ်။ (၍=I ဩ=] ဦ=M စသည်ဖြင့်…)
အောက်မှာရေးတဲ့အက္ခရာတွေကိုလည်း ရေးတာလွန်းလွယ်တယ်။ ဥပမာ… ဒုက္ခ= KkuFc မေတ္တာ= arwFwm
“ခဏစောင့်ပါ… Fက အောက်မှာရေးတဲ့အက္ခရာတွေအတွက်ဆိုရင် ဘယ်လို့ မင်္ဂလာပါ့လို့ရေးနိုင်မလဲ”လို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် စိတ်မပူကြပါနဲ့နော်။ ကျွန်တော်အတွက်လည်း ဦးဆုံးမှာ ခက်ခဲပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ= rifF*vmyg (မင်+F+ဂလာပါ)လို့ရေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ့။
နံပါတ် ၃: ဇော်ဂျီဖောင့်မှာ Copyrightပြဿနာရှိတယ်။
အခု ကျွန်တော့် Firefoxမှာ ဇော်ဂျီရဲ့ renderingက သိပ်မကောင်းမို့လို့ ကျွန်တော် SaturnGodရဲ့ ဘလောဂ်ကိုရှာပြီးတော့ ဒီပုစ်တ်ကိုတွေ့ပြီ။
Firefox ကို ဇော်ဂျီ နဲ့ သုံးမရတာနဲ့ ချက်ခြင်း firefox ရဲ့ bugzilla မှာ report တင်ခဲ့ပါတယ်။
Jonathan Kew က ဒီလို ပြန်ဖြေထားပါတယ်။
The issue here is that the Zawgyi-One font lacks proper layout tables for Myanmar. When loading fonts for “complex” scripts (that require appropriate glyph shaping for correct rendering), Firefox on OS X checks whether the font has the necessary tables, and if not, it will skip it and fall back toadifferent font.This font is apparently using the Unicode Myanmar codepoints, but is designed to be used -without- proper shaping support, by instead encoding the text ina“visual” way rather than properly following the Unicode standard for representing Myanmar text.
We’re not going to invest time in trying to support hacks like this. There isaUnicode standard for Myanmar, and an increasing number of fonts that support it. That’s what people should be using for interoperable Myanmar text on the web.
(One other thing: I notice that this font appears to be based onahacked version of Microsoft’s Tahoma; as such, I suspect that it is in breach of the Tahoma license terms.
အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဇော်ဂျီ က unicode standard မလိုက်နာထားတဲ့အတွက် ပြဿနာ ဖြစ်နေရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဇော်ဂျီ font က Microsoft ရဲ့ Tahoma ကို hacked လုပ်ထားတဲ့ version ဖြစ်တဲ့အတွက် Tahoma license နဲ့ ညှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေ fix မလုပ်ပါဘူးလို့ ဖြေထားပါတယ်။
ကျွန်တော်က Macမသုံးပေမယ့် ကျွန်တော်မှာလည်း ဒီပြဿနာရှိနေတယ်။ ကို Kewရဲ့စကားတွေက မှန်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့် ဘလောဂ်ပေါ်မှာ ဇော်ဂျီမသုံးရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Microsoftနဲ့ တရားစွဲဆိုမှုမရှိချင်ဘူးကွာ။ Bill Gatesက ချမ်းသာတယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်မှာ ပိုက်ဆံလုံးဝမရှိဘူးကွယ်။ (ရှိရင် ဗမာပြည်ကိုသွားမှာပေါ့။)
ပြဿနာတစ်ခုကတော့ အွန်လိုင်းကမ္ဘာမှာ အသုံးအပြုဆုံးတဲ့ဖောင့်က ဇော်ဂျီဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နည်းနည်းလိုအပ်နေတယ်။ ကျွန်တော့် Firefoxထဲကို ဇော်ဂျီဖောင့်မှ ယူနီကုဒ်ဖောင့်သို့ ပြောင်းပေးခြင်း programသုံးနေပေမယ့် မပြည့်စုံဘူး။ အကုန်လုံးကိုမပြောင်းဘူးကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့ Settingsမှာ Default Fontအနေနဲ့ ဇော်ဂျီကို၎င်း ပိတောက်ကို၎င်း ခဏခဏပြောင်းရတယ်။ စိတ်ညစ်စရာဘဲကွ။ (ပိုကောင်းတဲ့ converterအကြောင်းသိရင် ပြောပေးပါ။)
ဟုတ်ကဲ့ ဒါဘဲနော်။ ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာက ခင်ဗျားတို့ အားလုံး ယူနီကုဒ်ဖောင့်ကိုပြောင်းပေးလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဖြစ်ရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဇော်ဂျီအကြောင်းမေပစ်နိုင်လိမ့်မယ်။
6 thoughts on “ယူနီကုဒ်… ယူနီကုဒ်…”
ဟုတ်တယ်… အစ်မလဲ unicode ပြောင်းသုံးချင်ပါတယ်… ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက အရင်ရေးထားတဲ့ပိုစ့်တွေက ဇော်ဂျီနဲ့ဖြစ်နေတော့ အဲဒိပိုစ့်တွေက ဘာဖြစ်မလဲ… ပြီးတော့ အများစုကလဲ ဇော်ဂျီသုံးနေတော့ ကိုယ်ရေးတာတွေကို မမြင်ရတော့ရင် စာလာဖတ်တဲ့သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မှာကတစ်ကြောင်း… ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ယူနီကုတ်ကို ဘယ်လိုသုံးရမလဲ မသိတာကတစ်ကြောင်း ကြောင့် မပြောင်းဖြစ်တာ…. သူများဘလော့တွေလိုက်ဖတ်အုံးမှပါပဲ… ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာ…
မဗေဒမှာ ကိုယ့်ရဲ့ WordPressဘလောဂ်ရှိရင် (WordPress.com မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်တိုင်း serverမှာ) SaturnGodရဲ့ “Myanmar Unicode embed”ဆိုတဲ့ plugin installလုပ်လို့ရမယ်ပြီးတော့ ဘယ်သူမှမဆို အဲ့ဒီယူနီကုဒ်ကို မြင်ရလို့ရမယ်။ ဇော်ဂျီလိုရေးထားတဲ့ပိုစ်တွေကတော့ ဒီ ဝက်ဆိုက် (http://lamb-fw.org/thanlwinsoft/www.thanlwinsoft.org/ThanLwinSoft/MyanmarUnicode/Conversion/myanmarConverter.html) ကိုသွားရင် ပြီး Zawgyi-One to Unicodeကိုနှိပ်တယ်ဆိုရင် ပိုစ် တစ်ပုဒ် နောက်တစ်ပုဒ် မြန်မာယူနီကုဒ်ကိုပြောင်းဖြစ်လို့ရမယ်။
တယ်ဟုတ်ပါလား…. အဲလို ဇော်ဂျီကနေ ယူနီကုတ်ပြောင်းလို့ရတာ မသိဘူး… လုပ်ကြည့်အုံးမယ်… ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင် server မရှိဘူး… WordPress လဲ မဟုတ်ဘူး… မဗေဒါက Blogspot သုံးတာ…
I don’t use Zawgyi. I only use Padauk, which is Unicode compatible. I use this Firefox plugin in read Burmese written in Zawgyi font. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/myanmar-converter/